नदीमा दिउँसै उत्खनन गर्दागर्दै भागाभाग, प्रशासन माैन – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार२०७५, १० चैत्र आईतवार ०१:१२
चैत्र १०, तनहुँ ।
तनहुँकाे देउलीघाट मा दिउँसै १२ बजे स्काइभेटरले धमाधम मर्स्याङदी नदीकाे बीच भागबाट धमाधम गिटी बालुवा निकाल्दै गरेकेा दैनिक जसाे देख्न सकिन्छ । चैत्र ९ गतेका दिन पनि यसरी नै स्काइभेटर र ४, ५ वटा टिपले धमाधम नदीकाे बीच भागबाट काम गरिरहेका थिए । केही समयपछि संयाेगबस ससस्त्र प्रहरीकाे एक टाेली नदीमा हराएका बालककाे शव खाेज्नकेा लागी सत्रसयबाट घाटतिर लाग्ने वित्तिकै टिपर तथा स्काइभेटर नदीबाट निस्केर भागाभाग भयाे । प्रहरीकाे टाेलीसंग जम्काभेट भयाे तर ससस्त्र प्रहरी अरू नै कामले अाएका कारण केही साेधपुछ समेत गरेन ।
तत्काल मैले सिडिअाे साव लाइ फाेन गरें । उहँाका अनुसार कुनै एउटा घाटमा अायाेजनाकाे लागी काम गर्न अनुमति दिइएकाे रहेछ तर उहाँलाइर् थाहा भएन यही हाे की अरू कुनै घाट । तर उहाँका अनुसार चेनवाला डाेजर अर्थात स्काइभेटर लगाउन भने कतै पनि अनुमति छैन । अनुमति लिएरै काम गरेकेा भए किन काम गर्दा गर्दै भाग्नुपर्ने ? हाेइन भने डुम्रे प्रहरी कार्यालय र अाँबुखैरेनी प्रहरी कार्यालयबाट करीब ६ कि.मि. दुरीकाे बीच भागमा पर्ने याे घाटमा काम भएकाे प्रशासनले थाहा नपाएकै हाे त ?
नदीमा पुल काे ५०० मि. भित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम छ तर साे स्थान पुलबाट करीब ३०० मिटर मात्र नजिकमा रहेकाे छ । नदीजन्य पदार्थ यसरी उत्खनन गरिरहँदा प्रशासनले केही नगरेकाे स्थानीयहरूकाे गुनासाे छ ।
तर दिउँसाे १२ बजे याे प्रशासनले नदेखेकाे हाे कि, नियम संगतकाे काम हाे की हाेइन हाेला हाे भने किन दिउँसै काम गर्दा गर्दै भाग्छन , चेन डाेजरले पुल नजीकैबाट नदीकाे बीच भागमा पुगेर यसरी झिक्न पाउने नियम छ कि छैन, जानकारी पाउँ है । अनि तअन्यत्र पनि यस्ताे छ भने जानकारी गराउनुहाेला है ।